10 Nzira Dzekunyora Memories Yekufamba | Chengetedza Chitima
musha > Mazano Ekufamba > 10 Nzira Dzekunyora Memories Yekufamba
Kufamba inzira inonakidza yekuziva tsika, nzvimbo, uye vanhu. Patinofamba tinodzidza zvakawanda zvekuti dzimwe nguva zvinoita sezvisingabviri kurangarira zvese zvenzvimbo huru uye zvinhu zvatakaita. zvisinei, izvi 10 nzira dzekunyora ndangariro dzekufamba dzinoita kuti ndangariro dzako dzirarame nekusingaperi, mumwoyo mako, uye kumba. Kubva pa scrapbooking kusvika pasocial media, kune nzira inoshamisa yekuti wese mufambi adzokorore nguva chero paunoda.
1. Nzira Dzekunyora Memories Yekufamba: Travel Journal
Kunyora pasi anecdotes madiki kubva kune yako rwendo rwokuyambuka Italy, kana bindu redoro muPrague, ndichirangarira mabudiro ezuva musi uyu, kana kuravira kwedoro nekuti zvinhu zvidiki zvinoita kuti rwendo rwusakanganwike. Kuchengeta bhuku rekufamba inzira yakanaka yekunyora ndangariro dzako dzekufamba.
Kunyora zuva nezuva mujenari rekufamba, kana nguva dzinokosha, zvose zviri kwamuri. Vamwe vanofarira kunyora pfupiso yezvakanakisa zvezuva, pakupera kwezuva, nepo vamwe vanotakura kabhuku kaduku, kukwanisa kunyora zvese pazvinoitika kana paine katsika kekukanganwa mazita enzvimbo, uye vanhu, zviitiko. Zvinofadza sei kupuruzira mujenari rekufamba kumba, kana kunyange pane imwe nguva murwendo rwako, uye rangarira vanhu vakanaka vawakasangana navo, nenzvimbo dzakashanyirwa, wonyatsoona kuti wafamba sei.
2. Gadzira Bhuku Rekufamba
Kusanganisa mafoto, makadhi, maps, kana mapositadhi mune scrapbook inzira inofadza yekunyora ndangariro dzekufamba. Uyezve, if you are a creative person, ipapo iwe unogona kunge uchigadzira inotyisa scrapbook. In a similar way, ari nzvimbo dzisingakanganwiki tinoshanya kunopfumisa hupenyu hwedu uye tinowedzera zvidimbu pakuzivikanwa kwedu sevanhu, uye vafambi, uye ndizvo zvichaitawo zvidimbu zvaunowedzera kune scrapbook. Mitsara yemapepa, zvimedu zvemapepa, pics, uye zvakanyorwa ndangariro, zvichawedzera kumunhu wauri, uye nyika yako yemukati.
Pamusoro pe, scrapbooks inzira inonakidza yekugovera mafambiro ako neshamwari uye nemhuri. Nyaya dzenzendo dzako dzinouya muhupenyu muscrapbook, mahwindo kune maonero, tsika nemagariro, nharaunda, uye nguva, pfeka hupenyu hwemavara, uye inogona kuita scrapbook chiitiko, chakavanzika, uye bhuku rinonakidza kuunza nzvimbo kune vanhu vasina kufamba ikoko.
3. Gadzira Yako Photo Album
Kunyora kunogona kuomera vamwe vanhu; kuwana mazwi akarurama, kana kukwanisa kumbomira mukati merwendo kunyora. zvisinei, kutora mifananidzo iri nyore, quick, uye zvinonakidza kuita kana uchifamba. saka, foto album inzira inotyisa yekunyora ndangariro dzekufamba.
Mukudzvanya kumwe chete unotora runako rwemahombekombe eIreland kana Tuscany pakuvira kwezuva. ndokubva, unogona kusarudza akanyanya kukosha mafoto, uye uvaunganidze mudhijitari album, nemanotsi madiki, mazuva, uye zviyeuchidzo zvidiki zvekukubatsira kugovera nyaya yerwendo rwako. Uyezve, foto album haitore nzvimbo yakawandisa yekuchengetedza, uye iwe unogona kuchiisa patafura yekofi, kana gadzira yakasarudzika sherufu kune ako ese ekufambisa mafoto maalbum.
4. Nzira Dzekunyora Memories Yekufamba: Mifananidzo
Kugara muVersailles magadheni kana kunakidzwa Amalfi Coast maonero - 2 yenzvimbo dzisina kujairika muEurope, iwe unowana kamwe-kamwe chido chekutora chiono chakanaka. saka, munguva dzakadai, unogona kutora bhuku rekunyorera muhomwe uye wotanga kudhirodha nguva nenzvimbo pamberi pako.
Nepo doodling inonzwika senzira yekusika yekunyora ndangariro dzako dzekufamba, hazvidi hazvo kuti uve netarenda rekupenda kana kufananidzira. Uyezve, mifananidzo yako haifanire kunge iri padanho rakafanana nereMonet. Sezvo chinhu chinonyanya kukosha pakuenzanisira ndangariro dzekufamba ndechekuti ivo pachavo, uye iva nesherufu izere nerwendo rwako unoratidza kurangarira nzendo dzinoshamisa muEurope.
5. Unganidza Uye Ratidza Mapositadhi
Zvisungirire pafiriji, gadzira collage yeimba yekutandarira, kana kufemerwa madziro, postcards vari zvinotyisa souvenirs. Pamusoro pe, postcards ndiyo imwe yenzira dzepamusoro dzekunyora ndangariro dzekufamba, zviri nyore kuwana, uye zvinoda zero kushanda pamagumo ako. Kutengeswa muchitoro chese chezvipo, nemusika wemumugwagwa, mapositadhi chiyeuchidzo chakakurumbira, kurangarira rwendo.
6. Nzira Dzekunyora Memories Yekufamba: Vlogging
Kuchengeta vhidhiyo blog, kana nemamwe mazwi, vlogging inzira inotyisa yekunyora ndangariro dzekufamba, kugara kwehupenyu hwose. Bata kamera, kana foni ine yepamusoro-notch kamera, uye gadzira account yeYouTube kuti uise mavhidhiyo ako ekufambisa, uye zviitiko zvako zvichararama nekusingaperi. Vlogging inobvumidza iwe kusarudza akanakisa mafuremu, taura nyaya, uye nyora nguva - kubva pamaonero ako.
Uyezve, vlogging inzira yakanaka yekugovera nzvimbo nenyika. Chekutanga, vlogging ndeyemunhu uye haina kutakura yakavanzika yekushambadzira ajenda. chepiri, vlogging inoratidza vanhu zvinhu zvisingazivikanwe chokwadi uye anecdotes kuseri kwenzvimbo dzine mukurumbira pasi rese. saka, vlogging chishandiso chikuru eco-hushamwari, kukubvumira kugovera imwe nyaya dzetsika, mahara-ye-charge, uye agenda, nenyika yevafambi.
Imwe nzira yevlogging uye iyo yedhijitari fomu yebhuku rekufamba ndeye blogging. Huwandu hwemablog ehupenyu nhasi hwakatanhamara, saka iwe unogona kuwana yakawanda mienzaniso yemabhurogi ekufambisa online kana usina chokwadi nzira yekutanga yako yekufamba blog. Muchidimbu, unogona nyore kutanga yako blog paWordPress, upload mapikicha ekufambisa, maitineraries, pfungwa, uye zvakawanda.
Musiyano mukuru pakati pekubhuroga uye bhuku rekufambisa ndewekuti bhurogi inzira yepamhepo, uye inowanikwa pasi rose pawebhu. Mafungiro ako ega anogona kuve nehutachiona, uye uve nevateveri vazhinji, izvo zvinoda kuverenga uye kufemerwa nendangariro dzako dzekufamba.
8. Nzira Dzekunyora Memories Yekufamba: Instagram
Iyo midhiya ine simba kwazvo munyika yanhasi ndeyesocial media, uye kana kuti kunyatsojeka, Instagram. nhasi, unogona kurodha chero ruzivo rwaunoda nezve chero nzvimbo munyika, pa Instagram. Uyezve, kufamba mablogiki uye mafambiro ekufambisa’ nzira yakanakisa yekunyora ndangariro dzekufamba ndeyekuisa nyaya, reels, uye kutumira ku Instagram.
Nokudaro, zvigadzire iwe peji ine mavara uye inonakidza Instagram peji, kunyora mafambiro ako, uye ndangariro dzinokosha. Chimbofungidzira kuti zvichange zvichiyevedza sei kutarisa kuburikidza nepeji ine mavara, kuona mavhidhiyo mapfupi ese, nemifananidzo yawakatora parwendo rwako, mumwedzi, uye kunyange makore achauya mushure mekufamba kwako.
9. Gadzira Bhokisi reKurangarira
Maps, postcards, uye matikiti emumuseum angori mashoma ezvinhu izvo vamwe vedu vanofarira kuchengetedza kubva kune yedu yakawanda nzendo dzakatenderedza pasirese. Zvinoshamisa kuti bepa diki kana kadhi rinogona kukuendesa kure kure mamaira, kune imwe tsika, nguva, uye nguva. saka, pachinzvimbo chekuti ndangariro dzese dzakanaka idzi dzarasika mubhegi, kana chikwama, kugadzira bhokisi rendangariro inzira inoshamisa yekunyora zvese izvi zvekufamba ndangariro, uye uvachengetedze kubva pane zvakaipa.
Semuyenzaniso, unogona kutora bhokisi reshangu rekare, zvishongedze, isa ndangariro dzako dzese dzekufamba mukati, wobva waaratidza pasherufu. Imwe pfungwa yebhokisi rekurangarira kugadzira bhokisi kubva kuhuni dzakadzokororwa, saka zvese zviri zviviri eco-hushamwari uye kugadzira. Chero nzira, a memory box ndeimwe ye 10 nzira dzakakosha dzekunyora ndangariro dzekufamba.
10. Tevera Rwendo Rwendo App
A Dutch kufamba tanga Polarsteps mumwe muenzaniso wekuti iwe unogona sei kunyora ndangariro dzekufamba munyika inokurumidza kukurumidza tekinoroji yatinogara mairi.. Polarsteps app inobvumira kuteedzera nhanho dzako, pfungwa, pfungwa, nzvimbo dzakashanyirwa, uye nezvimwe zvakawanda kubva mukunyaradza kwefoni yako, nekudzvanya kamwe chete. Imwe mhedzisiro inoshamisa yekutevera rwendo rwako ndeye inoshamisa yekufambisa mafoto album, pakupedzisira, yakagadzirwa uye yakagadzirwa newe, yenguva dzaunofarira.
Kupedza, nzira dzakasiyana dzekunyora ndangariro dzako dzekufamba, kubva padanho rekutanga hariperi. Kubva maapplication kusvika kune ekare uye akanaka ekufambisa magazini, unogona kusarudza chimwe cheizvi 10 nzira dzataurwa pamusoro apa, kunyora, share, uye dzokorora nzendo dzako dzinoshamisa kutenderera pasirese.
Isu tiri Chengetedza Chitima achafara kukubatsira kuronga rwendo rusingakanganwike kutenderera Europe, kwaunogona kugadzira ndangariro dzehupenyu hwose.
Iwe unoda kumisa yedu blog positi "10 Nzira dzekunyora Memories Yekufamba”Pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fways-document-travel-memories%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
GwaroTravelMemories	trackyourtravels	TravelMemories
Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba UK, Famba Europe